Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) - Hello Sayarwon
Thin Myat Sandi Cho မှ ရေးသားသည်။ 15/02/2018 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ကဘာလဲ။
ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေနဲ့ အခြားအာရုံကြောအဖွဲ့အစည်းဆဲလ်တွေကို အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရာမှာ ခန္ဓါကိုယ်ကထုတ်ပေးတဲ့ကယ်မီကယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်ဦးနှောက်ထဲမှာအရမ်းနည်းခြင်းက စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းမမှာအဓိကကျပါတယ်။ အရမ်းများခြင်းက နာဗ်ဆဲလတွေအရမ်းတက်ကြွစေပြီး ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုလို့ခေါ်တဲ့ သေစေန်ုငလောက်တဲ့လက္ခဏာအစုအဝေးကြီးကိုဖြစ်စေပါတယ်။
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့-
ဒီလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင်ဆေးအသစ်သောက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒါမှမဟုတ်သောက်နေကျဆေးကိုပမာဏတိုးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမျာ ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုရှိနေပြီလို့ သံသယရှိနေပြီဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသပါ ဒါမှမဟုတ်အရေးပေါ်ခန်းကိုချက်ချင်းသွားပါ။ ဆိုးဆိုးရွားရွားလက္ခဏာတွေ ပြင်းထန်လာရင်ဒါမှမဟုတ် ရုတ်တရက်ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကိုသက်ရောက်စေတဲ့ အထူးသဖြင့်စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက်ဆေးတွေလိုမျိုး ဆေးတွေမှီဝဲနေရတယ်ဆိုရင်
ုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုရဲ့အကြေီးမားဆုံးအန္တရာယ်က ဆီရိုတိုနင်ကိုသက်ရောက်တဲ့ဆေးနှစ်မျိုးသို့နှစ်မျိုးထက်ပိုပြး၊ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ဆေးေ ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးတွဲပြီးမှီဝဲနေရင်တွမှီဝဲနေရင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီရိုတိုနင်တွေကိုများစေတဲ့စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက် အများဆုံးညွှန်လေ့ရှိတဲ့ဆေးတွေက ဆီရိုတိုနင်ရီအပ်တိက်အင်ဟစ်ဘစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီတာလိုပရမ်၊ အက်ဆီတာလိုပရမ်၊ ဖလူရိုဇီတင်း၊ ဖလူဗိုဇာမင်း၊ ပါရိုဇျွှီင်း၊ နဲ့ ဆာထရာလင်းဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဆီရိုတိုနင်ကိုများစေတဲ့ အခြားဆရာဝန်ညွှန်တဲ့ဆေးတွေနဲ့ ဆေးဆိုင်တွေမှာဝယ်နိုင်တဲ့ဆေးတွေချည်းသက်သာက် သို့ တွဲပေးခြင်းက ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ဆီရိုတိုနင်နဲ့နောအပီနက်ဖရင်ဆေးတွေကိုနာဗ်ကြောတွေကပြန်သိမ်းခြင်းကိုတားတဲ့ဆေးများ အက်စအန်အာအိုင် desvenlafaxine (Khedezla), desvenlafaxine succinate (Pristiq), duloxetine (Cymbalta), levomilnacipran (Fetzima), and venlafaxine (Effexor)
အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတွက် ဒက်စ်ဆီရယ်
almotriptan (Axert), Amerge (naratriptan), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex), and zolmitriptan (Zomig)
Certain pain medications, including fentanyl (Sublimaze, Fentora), fentanyl citrate (Actiq), meperidine (Demerol), pentazocine (Talwin), and tramadol (Ultram)ကဲ့သို့သော ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းအတွက်ဆေးများ
ဆေးဆိုင်တွေမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝယ်နိုင်တဲ့ ချောင်းဆိုးပျေက်ဆေး ဒက်စ်ထရိုမီသော်ဖန်နဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရှိမှဝယ်နိုင်တဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများ အအေးမိခြင်းအတွက်ဆေးများ
granisetron (Kytril), metoclopramide (Reglan), and ondansetron (Zofran)ကဲ့သို့သော မူးဝေခြင်းအတွက်ဆေးများ
vortioxetine (Trintellix -formerly Brintellix) and vilazodone (Viibryd)ကဲံသို့သော စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းအတက်ဆေးများ
အယ်လ်အက်စ်ဒီနဲ့ကိုကိန်းကဲံသိုေ့သာတရားမဝင်ဆေးများ၊ St. John’s wortနဲ့ဂျင်းဆင်းစတဲ့ဖြည့်စွက်စာများက ဆီရိုတိုနင်ကိုသက်ရောက်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကျဆေးတွေနဲ့ တွဲပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစိုကု ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အက်ဖ်ဒီအေ အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းက ဆေးထုတ်လုပ်သူတွေကို ဆေးညွှန်းမျာ ဆီရိုတိုနင်ေရောဂါစုဖြစ်နိုငချေရှိကြောင်း လူနာတွေကိုသိစေဖို့ ဆေးညွှန်းမှာထည့်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ သင်သောက်နေတဲ့ဆေးတွေဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ထားတဲ့ေးဆးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မသေမချာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ ဆေးညွှန်းကိုဖတ်ပါ။ ဆရာဝန်နဲ့မဆွေးနွေးခင်မှာ ဆေးကိုမရပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစု ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကိုများစေတဲ့ဆေးတွေ လတ်တလောစသောက်တာမျိုး။ ဆေးပမာဏတိုးလိုက်တာမျိုး
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုကို ရောဂါအဖြေရှာအတည်ပြုဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ သင့်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှသူက ဆေးများ၊ ဖြည့်စွက်ဆေးများ။
ပြန်ညလ်ဖန်တိးထားတဲ့ဆေးဝါးများအသုံးပြုမှုအပါအဝငါ သင့်ကျန်းမာရေးရာဇဝင်ကိုမေမြန်းခြင်းနဲ့ ကိုယ်ခန`ဓါပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသောအခြေအနေတွောကာင့်လည်း ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုအလားတူလက္ခဏာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အခြားသောအောကာင်းရင်းတွေကနေလည်း ခွဲခြားနုငိဖို့ ဓတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုတွေလည်း ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လူနာတွေကို စမ်းသပ်လေ့လာဖို့နဲ့ လက္ခဏာတွေကိုကုသဖို့ ဆေးရုံတက်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဘန်ဇိုဒိုင်ယာဇီပင်းတွေကို တက်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဆတ်ခြင်းများအတွက်ပေးပါတယ်။ အကြောဆေးအရည်တွေကို ရေဓါတ်ကိုထိန်းပေးထားနိုင်ဖို့ ပေးရပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုကိုဖြစ်စေတဲ့ဆေးတေါကိုဖယ်ရှားပြစ်ခင်းက အဓိကကျပါတယ်။ အကြောဆေးသွင်းပြီးရေဓတ်ထိန်းပေးခြင်းကလည်း အတွေ့ရများပါတယ်။ ပြင်ထးန်တဲ့အခြအနေတွေမှာ ဆီရိုတိုနင်ဆေးထုတ်ခြင်းကိုတားတဲ့ ဆိုင်ပရိုဟပ်တာဒင်းဆေးတွေကို သုံးပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့်Serotonin syndrome (ဆီရိုတိုနင် ရောဂါစု)ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်နဲပဆွေးနွေးပါ။ သင့်ဘာသာသင်မှီဝဲနေတဲ့ဆေးတွေကို မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်က ဆေးအသစ်ညွှန်းတဲ့အခါမှာ သင်မှီဝဲနေတဲ့ဆေးတွေအားလု့းကို သေချာပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့် အခြားဆရာဝန်တွေညွှန်းထားတဲ့ဆေးတွေကို သောက်နေရတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်နဲ့သင့်ဆရာဝန်က ဆီရိုတိုနင်ပမာဏကိုသက်ရောက်တဲ့ဆေးတွေပေါင်းပေးခြင်းရေဲ့ကောင်းကျိုးက ဆိုးကျိေုးထက်ပိုများနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင် ဆီရိုတိုနင်ရောဂါစုဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်း သတိထားရပါမယ်။
(Learn about serotonin syndrome. What are the symptoms, the causes and how to treat this condition? What can we do to cope and prevent its symptoms?)